पहिरोले संखुवासभाको सभापोखरी थुन्यो, बाह्रबिसे बजार नै जोखिममा ! « Dhankuta Khabar
पहिरोले संखुवासभाको सभापोखरी थुन्यो, बाह्रबिसे बजार नै जोखिममा !
संखुवासभा । वर्षाका कारण संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका–४, फाक्सीबुङमा पहिरो झरेपछि सभाखोला थुनिएर बस्ती नै जोखिममा परेको छ । बुधबार दिउँसोसाढे २ बजेतिर पहिरो खसेपछि सभाखोला थुनिएको उज्यालो अनलाईनमा खबर छ ।
सभापोखरी गाउँपालिकाको केन्द्र बाह्रबिसे बजारबाट ३ किलोमिटर उत्तरमा रहेको फाक्सीबुङको सिँगै पाखो नै बगेर सभाखोला थुनिएर तीन सय मिटरभन्दा ठूलो ताल जमेको सभापोखरी–६ नम्बरका वडाध्यक्ष बिकास पौडेलले बताउनुभयो ।
सभाखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ६ नम्बर वडाको बीचमा रहेको सभाखोलामा फाक्सीबुङको सिँगै पाखो नै बगेर सभाखोला थुनिएको उहाँले बताउनुभयो । पहिरोले फाक्सीबुङमा रहेको गोठहरु समेत बगाएको छ ।
त्यहाँ मानवीय बस्ती नभएकाले अहिलेसम्म मानवीय क्षति भने नभएको वडाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । पहिरोले थुनिएको सभाखोलाको वारिपट्टि फाक्सीबुङ पर्छ भने पारिपट्टि खेवारिङ पर्दछ । खोला नै थुनिएर ताल जमेपछि ताल फुटेमा तलतिर रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र समेत रहेको बाह्रबिसे बजार नै बगाउने खतरा रहेको छ ।
बाह्रबिसे बजारमा झण्डै सय घर रहेको र माथिबाट जमेको ताल फुट्यो भने बाह्रबिसे बजार नै बगाउने खतरा रहेको छ । घटनास्थल सदरमुकाम खाँदबारीबाट एकदिन टाढा पूर्वमा पर्दछ । तीन दिनदेखि अविरल वर्षा भइरहेकाले यस क्षेत्रमा पहिरो झरिरहेको छ ।
अविरल वर्षाका कारणले सञ्चार सम्पर्क गर्न समेत मुस्किल रहेको छ । पहिरोले खोला थुनिएपछि बाह्रबिसे बजार र आसपासका क्षेत्रहरु उच्च जोखिममा परेका छन् । त्यसैले स्थानीय मानिसहरु समेत त्रसित बनेका छन् । थुनिएको सभाखोला एकैपटक खुलेमा तुम्लिङटारसम्म प्रत्यक्ष असर पर्ने छ ।
स्वतन्त्र सेनानी गुप्ताको निधन,मुख्यमन्त्री राईद्धारा श्रद्धाञ्जलि अर्पण !
झापामा सुनकागती सफल
झापाको कमलमा च्याउ खाएर परिवारै अस्पताल भर्ना
बि’रामी लिएर धरान हिंडेको बोलेरो अरुण नदीमा ख’स्दा ६ जना बे’पत्ता
दमक नगरपालिकाले संविधान दिवश भव्य मनाउने